လွတ်လပ်ရေးကို အလျင် . . . ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
လွတ်လပ်ရေးကို အလျင် . . .
Friday, October 09, 2009 0000 No comments
လွတ်လပ်ရေးကို အလျင် လုပ်ရမည်
၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့များအား မြွက်ကြားချက်
ငါတို့ ပြည်သူ့ရဲဘော် တပ်ဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို ယခုလို ရုတ်တရက် ချက်ခြင်း ခေါ်ရခြင်းဟာ ကွန်မြူနစ်ပါတီ သံ ယောဇဉ် မကင်းတဲ့ ရဲဘော်များ တပ်ဖွဲ့မှ ထွက်ခွါသွားခြင်းကို ရဲဘော်အပေါင်း ရှင်းလင်းသိရှိဖုိ့ ခေါ်ရခြင်းဖြစ် တယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ သံယောဇဉ် မကင်းဘဲ တပ်ဖွဲ့မှ ထွက်သွားတဲ့ရဲဘော်များအတွက် အချို့ အချောင်သမား စားဖား သတင်းစာ တစောင်နဲ့ နောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် အချို့ နှင့် မကင်းဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းခင်လို့မင်လို့ အားနာတဲ့ သတင်းစာတစ်စောင် နှစ်စောင်က ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားပြီလို့ ရေးသားကြတယ်။
သူတို့ ဘာ့ကြောင့် ထွက်သွားရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနှင့် ပက်သက်၍ ငါတို့ဆီမှာ စာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီစာ တွေထဲမှာတော့ စာလေးငါးခြောက်ကြောင်းလောက်နှင့် လူသုံးယောက် လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ သို့သော်လဲ သူတို့သတင်းစာထဲထည့်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ အကျယ်တ၀င့် ဘာကြောင့် ထွက်ရတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲဒီ လို ရေးတဲ့အကြောင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး တပိုဒ်စီရှင်းပြမယ်။ ရရှိထားတဲ့ အတွင်းစာတစောင်ကိုတော့ ငါမပြော တော့ဘူး။ ရှည်လဲရှည် ပါဠိလေနှင့် ရေးထားတော့ နားလည်မှာလဲ မဟုတ်ဘူး။
တိုင်းပြည်ကြေညာချက်နှင့် ပက်သက်လို့ ရှင်းရမယ်ဆိုလျှင် ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ ရေးနေကြတာကို ကြည့်ရတာ အိန္ဒိယပြည်မှ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ညွှန်ကြားချက် အရနှင့် တူတယ်။ အိန္ဒိယပြည် ကွန် မြူနစ်တွေ လုပ်တဲ့ ကိစ္စနှင့် ပက်သက်၍ ပြောရလျှင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံကတောင်မကြိုက်ဘူးဆိုသေးတယ် ဆို တာကို အတွင်းကျကျသိရတယ်။
အိန္ဒိယပြည်မှာ လက်ျာသမားများ ကြီးစိုးတဲ့ကွန်ဂရက် အဖွဲ့ကြီးကို တတိုင်းလုံးတပြည်လုံး ယုံကြည်အားကိုး တယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာ ထင်ရှားသလဲဆိုလျှင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထင်ရှားတယ်။ ကွန်ဂရက်မှာ နောက်လိုက်လူထုရှိ နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။ ယနေ့အထိ ဒီလူထုကို ထိန်းသိမ်းထားလို့ရတာဟာ လူမျိုးရေးတရားနှင့်ကြည့် လျှင် လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ သို့သော်လဲ လက်ျာသမားများ လွှမ်းမိုးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာမှန်တယ်။ အဲဒီကွန် ဂရက်အဖွဲ့ကြီးမှာ လူထုနောက်လိုက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုလျှင် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့ ဂန္ဒီ ၊ နေရူးတို့ဟာ လူထု လုပ်ငန်းကို သစ္စာမဖောက်ဘဲ လုပ်တယ်။ သူတို့မှာလဲ အယူအဆသဘောကွဲလွဲမှု ရှိကြ တယ်။ သို့သော် ဒီကွန်ဂရက် အဖွဲ့ကြီးကို တမျိုးပေါင်း၍ အမျိုးသားတပ်ပေါင်းစုအဖြစ် ၀င်လုပ်နေကြခြင်းဘဲ။
ဒီစစ်ကြီးအတွင်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းရေးကိစ္စဆို၍ နယ်ချဲ့ စစ်ကြီးမှ ပြည်သူ့စစ်ကြီးအထိ ပြောင်းလဲသည် ဆိုပြီး စွပ်စွဲကြတာ ရှိတယ်။ အဲတာ ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံး ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ကြီးမှာ ဆူပူသောင်းကျန်းလာ တော့ ကွန်မြူနစ်တွေ အကုန်ထုတ်ခံရတာဘဲ။ ငါတို့ဆီမှာလဲ စတင်လုပ်ကိုင်တုန်းက ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ဗ မာ့တပ်မတော်တို့ ပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်။ နောက်မှ ပါဝင်လာသည့် လူကြီးတွေက သိပ်များတာမဟုတ်ဘူး၊ အင် အားလည်းမတောင့်ဘူး။
ယခု ကွန်မြူနစ် လက်ျာသမားများက လက်ဝဲသမားများအား ဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေတယ်။ အဲဒီလို အခါမှာ အိန္ဒိယ ပြည် အခြေမျိုးကို သူတို့က ပြောဆိုတယ်။ သူတို့က အိန္ဒိယပြည်လို မထူးတဲ့အခြေအနေကို ဗမာပြည်ကယူ၍အိန္ဒိ ယပြည် ကွန်မြူနစ် ပီ၊ စီ၊ ဂျိုရှီ လမ်းညွှန်မှုကို လိုက်နေတယ်။ မရှိတဲ့အားကို ရှိလေဟန် ပြောဆို လုပ်ကိုင်နေ တယ်။ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည် အရေးတော်ပုံ၊ လွတ်လပ်ရေးအရေးတော်ပုံတွေမှာ ကာယကံမြောက်အားဖြင့် သစ္စာ ဖောက်နေတယ်။ သူတို့ စကားတွေနဲ့ ပြောရယင် အိန္ဒိယ အခြေအနေကို ဗမာပြည် ယူလာပြီး လုပ်နေတဲ့ဟာ ဗ မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ဘ၀နှင့် ကင်းကွာပြီး ဗမာပြည်ရဲ့ဘ၀ အသိဥာဏ်နှင့် မလုပ်ကြတဲ့ သဘောဘဲ၊ အဲဒါ သူတို့ ကွန် မြူနစ်တွေရဲ့ စကားနှင့်အပြောဘဲ။
ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးဟာ နယ်ချဲ့ သမားကို အပြုတ်တိုက်ရေးမှာ စေ့စပ်ရေး လမ်းလိုက်တယ်ဆိုပြီး ပြောနေ တယ်။ သို့သော်လဲ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးဟာ မိမိ မူလ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း မဖျက်ဘဲ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အ တွက် လူထု ယခုတိုင် ရှိသေးတယ် ဆိုတာ အထင်အရှားဘဲ။ နယ်ချဲ့ သမားကို ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်က မတိုက်ဘူး ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ စေ့စပ်ရေးလမ်းကို လိုက်ယင် ကွန်မြူနစ်တွေက ဘာကြောင့်မတိုက်သလဲ။ ဒီစေ့စပ်ရေးနည်း လမ်းကို ဖဆပလ ကလိုက်သလား၊ မလိုက်ဘူးလား ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါ။ စီတန်းလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက် အစိုးရ ထံ အမိန့်တောင်းခံတာဟာ ကွန်မြူနစ်ရဲ့အကြံပေးချက်ဘဲ။ ဒီလို စီတန်းလမ်းလျှောက်ရုံနဲ့ နယ်ချဲ့ တိုက်ဖျက်ရေး လို့ မယူဆနိုင်ဘူး။ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးက အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ပါဝင်ခြင်းသည် စေ့စပ်တယ်လို့ ခေါ်မလား။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အ ထုတ်ခံရခြင်းကို ဘာကြောင့် မကန့်ကွက်သလဲ။ အဘယ်ကြောင့် ရာထူးနှစ်နေရာ တောင်းသလဲမေးယင် ဘယ် လို ဖြေမလဲ။ ဘုရင်ခံထွက်ခိုင်းလို့ ထွက်ရတာကို ကျုပ်ထွက်လို၍ ထွက်တယ်ဆိုခြင်းဟာဘာသဘောလဲ။
မိမိတို့ လိုလားချက်များကို ဆောင်ရွက်သွားရာ၌ ရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့် လမ်းလွဲလုပ်ခြင်းသည် လုပ်နည်းတမျိုး သာဖြစ်တယ်။ တဦးနှင့်တဦးအေးချမ်းသာယာစွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းသာ စေ့စပ်ရေးဖြစ်တယ်။ ၎င်းလမ်းကို ကွန်မြူနစ် တို့သာ လိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ တရံရောအခါက “ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး ” ကို ကွန်မြူနစ် ခေါင်း ဆောင်များက “ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး ” စကားလုံးကို မတော်ဟုဆို၍ အဖြုတ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါလော။
ယခုအခါမှာ အချုပ်အချာအာဏာပိုင် နိုင်ငံကလေးများ မရှိဘူး ဆိုတာကို ကွန်မြူနစ်တွေ ရေးပြီး သခင်စိုးဝေဖန် ထားတာ ရှိတယ်။ ဒီလူတွေ ဒီလိုလမ်းမှားတွေ လိုက်နေတာဘဲ။ ကျုပ်တို့ဖက်မှာ တယောက်မှ မရှိဘူး။ သူတို့ဘဲ လမ်းလွဲတွေ လိုက်နေတယ်။ အေးချမ်းသာယာစွာ လွတ်လပ်ရေးရယူဖို့ကို မမှိတ်မသုံ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလဲ သူတို့ဘဲ။ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို လုပ်နေတယ်။ လမ်းလွဲကို မလိုက်။ ကွန်မြူနစ်သာနယ်ချဲ့  သမားနှင့်ပေါင်းသင်း၍ ဖဆပလ ကိုဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတယ်။
ငါတို့ပြည်သူ့ရဲဘော် တပ်ဖွဲ့သည် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးအား လမ်းမှန်လိုက်၍ ယုံကြည်စွာအားပေးထောက်ခံခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီကောင်းစားရေးအတွက် လက်ကိုင်တုတ်လုပ်ခြင်းကို ဒို့မထောက်ခံနိုင်။ ငါတို့သည် လူ ထုတိုက်ပွဲများ၌ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ရှေ့ တွင်လည်း ဆက်လက်ပါဝင်ရန်ဖြစ်တယ်။ ပါတီတစ်ခု နာမည်ရဖို့ ငါတို့ အားမ ပေး၊ ယခုလည်း အားမပေး၊ နောက်လည်းအားမပေး။
ရဲဘော် တပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လာပြတာဘဲ ရှိတယ်။ ထုတ်တဲ့အမိန့် ညွှန်ကြားချက်ဟာ အမှုဆောင်နှင့် ဗိုလ်မှူးအောင်တို့ဘဲ ရှိတယ်။ ထုတ်တဲ့အခါမယ်၊ ကွန်မြူနစ်က လူတွေနဲ့ဘဲ တိုင်ပင်ပြီး ထုတ်တယ်။ အချို့ ညွှန် ကြားချက်တွေကို ကွန်မြူနစ်တွေက ဗဟိုကို အကြောင်းမကြားဘဲ ထုတ်လို့ နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနှင့် စကား များကြတယ်။ အဲဒီအတွက်နောက်ညွှန်ကြားချက် ထုတ်လျှင် ငါ့အားလာပြရမယ်ဆိုတာ အာဏာရှင်လို့စွပ်စွဲတာ မင်းတို့ဘဲစဉ်းစားကြ။
ယခုထွက်ခွါသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေဟာ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လောင်းရိပ်မိနေတယ်။ ငါတို့က ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေးကို အဓိက ထား၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ သူတို့ဆွဲခေါ်ရာမပါလို့ ထွက်သွားခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ပြည် သူ့ရဲဘော် နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းမဟုတ် သူတို့က ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ကို ဖောက်ထွင်းဖို့လုပ်နေတာ၊ ငါ့ထက်ရဲဘော် များပိုသိပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တာကို အချောင်သမားစားဖားကြီး သတင်းစာနဲ့ ကွန်မြူနစ် အနံ့မကင်းတဲ့ သတင်း စာများ ရေးတာကို ရဲဘော်များ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ဖို့လိုတယ်။ အခု ခွဲထွက်သွားတဲ့ ရဲဘော်ထဲက အချို့  တော်တဲ့ ရဲဘော်များကို နှမြောပါတယ်။ သို့သော် မတတ်နိုင်ဘူး။ ရှေ့ ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖို့ အနယ်နယ်အ ရပ်ရပ် တပ်ဖွဲ့များမှ ကွန်မြူနစ် သံယောဇဉ် မကင်းသူများကို ဖယ်ရှား၍ ငါတို့ လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လက် လုပ် ကိုင်ရမယ်။ မကြာခင် ပြန်လည် ညွှန်ကြားချက်တရပ် ထုတ်ဖို့ကို စီစဉ်မယ်။ ကွန်မြူနစ် ကြေညာချက်တွေထဲ အ ကုန်လုံး ရှင်းပြီး၊ ကွန်မြူနစ်တွေက တမူးဖိုး လုပ်ပြီး သုံးမတ်ဖိုးလောက် အသားယူချင်တာ။
ပြောစရာတွေကလဲ အများကြီး၊ ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ မှတ်ထားကြ၊ ဒီကွန်မြူနစ် ပါတီ ကြီးပွားအောင် ငါလုပ်ပေး တာပါ။ နောက်ဆုံး သူတို့ကိုယ် သူတို့ သွေးနထင်ရောက်ပြီး ထင်ရာလုပ်နေတယ်။ တော်လှန်ရေးကိစ္စမှာလဲ စီစဉ် ချက်တွေကို ထိရောက်အောင် မလုပ်ဘဲ အနုပဋိလောမ သဘောအရ၊ ဘာအရနှင့်ပြောနေတယ်။ ဟိုတုန်းကသာ ကျကျနန ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်လျှင် အခု ဒို့ဗမာပြည်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားထက် သာမယ် မှတ်ထား။
သူတို့ နှောင့်ရှက်မှုကြောင့် လွတ်လပ်ရေး နှောင့်နှေးပြီး လာတယ်။ သူတို့ ပါတီအရေး ပဌမ၊ တိုင်းပြည်နှင့် လွတ် ဒုတိယ လုပ်နေတယ်။ ဒို့က ဒါကို မကြည့်နိုင်ဘူး။ တိုင်းပြည်နှင့် လွတ်လပ်ရေးကို အလျင် လုပ်ရမယ်။ ဟိန်း ဟောက်နေလို့လဲ အလကားဘဲ။ စီတန်းလမ်းလျှောက်ရုံနှင့် မပြီးဘူး။ လူထု သွေးစည်းမှု လုပ်ငန်းများနှင့် တကွ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ ကြေညာချက် အတိုင်း အစစအရာရာ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရမယ်။ ဗမာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားများ စု ပေါင်းမိအောင် လုပ်ရမယ်။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ လုပ်ငန်းဟာ လွယ်လွယ်နှင့် မရသေးဘူး။ တိုင်းရင်းသားများ ပါ ၀င်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်။ အဲဒီအတွက် ငါတို့၏ ပြည်သူ့ရဲဘော် ယာဉ်ရထားကြီးကို ခရီးဆုံးတိုင် မောင်း နှင်၍ ဗမာပြည် လွတ်လပ်သည်အထိ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီး ဆက်လက် ချီတက်ကြစို့။ ။